Pudding à la banane - Nahandro tsotra malagasy : Gouter
par Gaël RAKOTOVAO	 3 octobre 2015
Pudding à la banane.
Fotoana iketrehana azy: 45 mn
mofo dipaina 1,5
lait concentré 2càs
rano mafana 1/2 tasse ou 1/2tasse ronono velona
3 bananes lehibe
1 càs huile pour le moule
pudding: akora ilaina
Fikarakarana pudding à la banane
Tapatapahana aminy tanana ny mofo. Afangaro ny lait concentré sy rano mafana ary lomana ao ny mofo. Raha ronono velona no misy dia lomana anaty ronono masaka mafana ny mofo.
Tapatapahana aminy tanana ny mofo
Afangaro ny sucre sy atody.
Afangaro ny sucre sy atody
Avy eo afangaro ny mélange oeufs sy sucre sy mofo nilona ronono sy akondro voapotsitra.
Afangaro ny mélange oeufs sy sucre
Osorana menaka ny moule na cul de poule kelikely na ny lovia jobo mahazaka mamay. Arotsaka ny nahandro.
Arotsaka ny nahandro
Ampangotrahana mialoha anaty rice-cooker hatreo amin’ny atsasany ny rano. Apetraka ny moule misy nahandro tsy atao mikasika ny rano. Raha vilany dia asiana kapoaka mivadika anaty vilany dia eo ambony kapoaka no apetraka ny moule.
Ampangotrahana ny nahandro
Saromana ny rice-cooker na ny vilany dia avela hitanika 40mn. Esorina ny moule ka andrasana 5mn ho maina tsara vao démouler-na.
cuisine malgache recette, gouter malagasy, pudding facile et rapide, pudding rapide et facile, recette facile du pudding
Article précédent : Gateau à la banane
Gateau au yaourtArticle suivant :